Qaramada Midoobay oo sheegtay in 6 milyan oo Soomaali ah ay u baahanyihiin gargaar deg deg ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaQaramada Midoobay oo sheegtay in 6 milyan oo Soomaali ah ay u baahanyihiin gargaar deg deg ah
January 18, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Barakacayaal ku sugan Muqdisho. [Xigashada Sawirka: Qaramada Midoobay]
Nairobi-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 6.2 milyan oo dad ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya, oo ah kala bar shacab weynaha, ayaa u baahan gargaar deg deg ah, sida cuno, biyo iyo hoy, dadkaas ayaa waxaa saameeyay abaar iyo colaad, sida shalay oo Arbaco ahayd ay sheegtay Qaramada Midoobay, oo dalbatay lacag dhan $1.6 si wax loogu qabto.
Xafiiska Isku Xirka Arrimaha Insaanimada ee Qaramada Midoobay (UNOCHA) ayaa sheegay in deeq bixiyeyaashu ay uruuriyeen dhaqaale ku filnaa sanadkii 2017 si looga hortago macaluul iyo dilaacida shuban biyoodka, balse xaaladu ay xumaan karto sanadkan haddii aan la helin dhaqaale ku filan.
Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa beesha caalamka uga mahadnaqay uruurintii $1.3 bilyan sanadkii hore, waxaana uu sheegay in dhibbaatooyinkii hore kuwo lamid ah uu dalku wajahayo.
“Abaarta iyo colaada waa ay sii socdaan waxayna waxyeeli karaan nolosha malaayiin Soomaali ah, kuwaasoo weli barakac ah. Aniga oo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa beesha caalamka in ay sii wadaan caawimaada,” ayuu yiri Xasan Cali Khayre.
Deegaanada ugu daran oo ay dhibbaatadu ka jirto ayaa ah meelaha ay maamulaan maleeshiyada hubeysan ee Al-Shabaab, kuwaasoo diiday in gargaar la gaarsiiyo halkaas.
September 23, 2017 Soomaaliya oo markale caalamka ka codsatay in laga qaado cuno qabataynta hubka si looga adkaado Al-Shabaab
June 16, 2016 Haayada cunada aduunka u qaabilsan QM oo baaraysa eedaymaha raashinka dhacay ee Soomaaliya
Madaxweynaha dowladda Puntland oo tagay magaalada Dhuuso-mareeb ee gobolka Galgaduud
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka ayaa maanta oo Isniin ah kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb tan iyo bishii May 2019 markaas oo shirkoodii ay ku yeesheen [...]